Macalin Louis Van Gaal oo ku qarxiyay Weeraryahan Robin Van Persie & Warar kale (World Sport News ) !!
*** Kooxda Los Blancos Real Madrid ee horyaalka La Liga ayaa si toos ah ula soo wareegtay goolhayihii Qaranka Costa Rica hogaaminayay World Cup 2014 waa Keylor Antonio Navas. Boortahaan oo 27 jir ah waxaa laga soo iibsaday naadiga Levante ee isla horyaalka La Liga waxaana laga soo baxshay Aduun lagu sheegay 10 Milyan oo Euro.
Goolhaye Keylor Navas waxaa sidoo kale toosh buuran ku raadineysay kooxda Fc Bayern München ee horyaalka Bundesliga. Marka laga soo tago goolhayahaan waa xiddigii sadexaad oo Koobka Aduunka 2014 wacdaro ka soo dhiga waliba ay la soo wareegto kooxda Real Madrid waxaana naadigaan uga soo horeeyay laacibiinta kala ah Toni Kroos (Germany) iyo James Rodriguez (Colombia) .
*** Macalinka cusub ee kooxda the Red Devils Manchester United Mr.Louis Van Gaal ayaa si cad wuxuu u shaaciyay inuusan safan doonin weeraryahan Robin Van Persie kulanka ugu horeeya ee horyaalka Ingiriiska oo lagu wado 16-ka bishaan Agoosto inay kooxda Man Utd la ciyaarto naadiga Swansea City.
Sidoo kale Tababare Louis Van Gaal ayaa carabka ku dhuftay in weeraryahan Robin Van Persie aan la safi doonin kulanka saaxiibtinimo ee garoonka Old Trafford ku dhex maraya kooxaha Manchester United Vs Valencia taariikhdu marka ay tahay 12-ka bishaan Agoosto.
Weeraryahan Robin Van Persie ayaa mudo 3 isbuuc ah waxa uu fasax kaga maqnaa naadiga Manchester United oo kulamo saaxiibtino iyo koob kaga qeeyb galay garoomo ku yaala gudaha dalka Mareeykanka. Tababare Louis Van Gaal ayaa yiri sidatan :
" Waan ogahay Robin Van Persie wuxuu jecel yahay inuu safto kulan kaste balse sidaas oo kale waxaa jecel 30 ka mid ah Xiddigaha Manchester United waana inuu aalamiiteeyaa marka hore Robin Van Persie ayuu yiri macalin Louis Van Gaal "
*** Xiddiga Qaranka Ingiriiska Frank James Lampard ayaa si amaah ahaan ah wuxuu ugu yimid kooxda Manchester City kaas oo ka yimid dhanka naadiga New York City FC sida uu shaaciyay macalinka Man City Mr.Manuel Pellegrini. Laacib Frank James Lampard oo mudo 13 sano ah ka tirsanaa kooxda The Blues Fc Chelsea wuxuu dhawaan ku biiray naadiga New York City FC ee horyaalka dalka Mareeykanka balse wuxuu inta sanadkaan ka harsan amaah ahaan ugu dheeli doonaa kooxda Manchester City oo lagu wado inuu soo gaaro maalinta Arbacada ah .